Iwe unoziva iro zera-rekare kuraira kwekumirira usati wagadziridza chishandiso, ingangoitika? Ziva izvozvo. Gadziridza yako iPad izvozvi. Gadziridza yako Apple Watch izvozvi. Gadziridza yako iPhone izvozvi. Usatopedza kuverenga chinyorwa ichi; enda unogadziridza zvinhu zvako, wobva wadzoka. Apple chete chakaburitsa dambudziko hombe.
Apple yakatanga kubuda iOS 14.4.2, iPadOS 14.4.2, uye watchOS 7.3.3 nhasi, uye hapana imwe yedzidzo idzi inowedzera zvitsva. Panzvimbo iyoyo, iyo yekuvandudza inodzika hombe yekuchengetedza gomba iyo inokanganisa iPads, iPhones, uye Apple Watches.
Zvinosuruvarisa, kushomeka kweApple patched izero-zuva, zvinoreva kuti vamwe vatambi vakaipa vakatomboishandisa. Clement Lecigne weGoogle Threat Analysis Group naBilly Leonard weGoogle Threat Analysis Group vakatanga kuzvitaurira pasi CVE-2021-1879. Apple inobvuma mune peji rekutsigira kuti inoziva chero mushumo mumwe chete kuti "iyi nyaya inogona kunge yakashandiswa zvakanyanya."
Dambudziko rinobva kune Webkit browser injini. Iyo inobvumidza vatambi vakaipa kuvhura kwese kwese kwese -saiti kunyorera kurwisa nekunyengedza vashandisi kuti vashanyire rakaipa rakagadzirwa peji rewebhu kana zvimwe zvemukati zvewebhu. Kurwisa-saiti kunyorera kurwisa kwaiita kuti vabiridzi vawane ruzivo kubva kune mamwe mawebhu webhu awakavhura pane yako iPad, iPhone, kana Apple Watch. Kana iwe uchifunga izvo kuburikidza, iwe unogona kufungidzira kuti zvakashata sei izvo zvinogona kuve.
Neyekuvandudza, iwe wakachengeteka (kunyange iwe uchifanira kuramba uchingwarira paunoshanyira mawebhusaiti matsva), saka enda unogadziridza zvinhu zvako izvozvi. Iyi haisi iyo yaunoda kusendeka. Iwe unogona kuwana izvo zvekuvandudzwa zvinoenda nekuita "cheki yekuvandudzwa" pane yega yega zvishandiso zvako.
iPad 2017 vs iPad Air 2: Ndiyo here pakupedzisira nguva yekukwiridzira?